Xildhibaanada Badbaadada Baarlamaanka oo dalbaday in loo soo celiyo Ilaaladii Jawaari - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xildhibaanada Badbaadada Baarlamaanka oo dalbaday in loo soo celiyo Ilaaladii Jawaari
April 5, 2018 admin329
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa sheegay in Ilaaladii Guddoomiye Jawaari la xiray, taasna ay tahay arrin xadgudub ku ah xurmadiisa, waxaana ay ku baaqeen in loo soo celiyo ciidamadii laga qaaday.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa ugu baaqay Xukuumadda inay faraha kala baxdo arrimaha baarlamaanka, isla markaana ay sii qaadeyso tallaabooyin xaalada uga sii dari karta.
Xildhibaanadan ayaa beeniyay eedeynta loo jeediyay Guddoomiye Jawaari ee ahaa inuu xerada qabsaday, hase ahaatee taa bedelkeed waxay sheegeen in boqolaal ciidamo ah ay dowladda ku soo daadisay waddooyinka iyo gudaha xarunta baarlamaanka.
Ilaalada Guddoomiye Jawaari ayaa lagu eedeeyay inay ka qeyb qaateen arbushaadii shalay ka dhacday Baarlamaanka, kaddib markii iyagoo hubeysan ay galeen, waxaana ciidamada ilaalada qaarkood la xiray, kuwa kalena lagu amray inay xarunta ay ilaalinayaan ka soo tagaan.
Qaar ka mid ah Wadooyinka Muqdisho oo maalintii 2-aad Xiran
Khayre oo QM ka dalbaday in Soomaaliya laga qaado xayiraadda Hubka
Kenya oo sheegtay in ay Dishay Sargaal Sare oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab